Vantany vao manapa-kevitra ny hampiasa azy | Ota Ward Hall Aplico
Tatitra ara-bola / tatitra momba ny asa
Fivoriana mialoha ny mari-pankasitrahana
Rehefa mampiasa ny efitrano lehibe, efitrano kely ary efitrano fampirantiana
Na rehefa mampiasa ny fotodrafitrasa amin'ny fialamboly izay heverina fa ilaina amin'ny fitantanana trano ianao, amin'ny fanantenana iray volana alohan'ny daty hampiasana ho fitsipika ankapobeny dia mitondra ireto antontan-taratasy manaraka ireto ianao, mankanesa any amin'ny mpitan-tsoratra sy fivoriana.
Tabilao fandaharana na fandrosoana, taratasy kely, drafitra fiarovana, tapakila fidirana na tapakila isa (ho ohatra iray)
Ho fanampin'ny voalaza etsy ambony, ny zava-nitranga tao amin'ny efitrano lehibe dia misy sary an-tsehatra, sary fanaingoana ary sary akustika.
(Raha tsy tapa-kevitra, azafady mba ampahafantaro anay ny anaran'ilay tompon'andraikitra sy ny mombamomba ny fifandraisana.)
Rehefa mampiasa studio
Azafady mba mifanakaloza hevitra amin'ny mpiasa momba ny firafitry ny efitrano sy ny toerana ilaina hampiasaina farafahakeliny 2 andro alohan'ny daty hampiasana.
Rehefa mivarotra entana
Azafady, alao antoka fa mandefa "Fangatahana ho fankatoavana ny varotra entana sns".
Fangatahana fankatoavana ny varotra entana
Tsy azo amidy amin'ny studio ny entana
Fampandrenesana amin'ireo biraom-panjakana mifandraika amin'izany, sns.
Miankina amin'ny atin'ny hetsika dia mety ilaina ny mampandre ireto biraom-panjakana manaraka ireto.
Azafady zahao mialoha ary araho ny fomba ilaina.
Fampiasana afo, sns. Diviziona fisorohana ny sampana mpamono afo ao Kamata
2-28-1 Kamatahoncho, Ota-ku Telefaona: 03-3735-0119
Fiarovana sns. Kaomisaria Kamata
2-3-3 Kamatahoncho, Ota-ku Telefaona: 03-3731-0110
Copyright Fikambanan'ny zon'ny mpamorona mozika Japon
Sampana fampisehoana JASRAC Tokyo Event
Nippon Life Shinjuku West Exit Building 10F Telefaona: 03-5321-9881
Fametrahana doka / fanamarihana
Azafady mba farito azafady ny anaran'ny mpikarakara, fampahalalana mifandraika, sns. Amin'ny afisy, trakta, tapakila fidirana sns.
Raha te-hametaka afisy sy takelaka ao amin'ny efitrano ianao, azafady mba ampahafantaro anay. (Voafetra amin'ny hetsika natao tao amin'ny hotely)
Azafady mba ampahafantaro anay raha te handefa takelaka famantarana ianao.
Ny fampahalalana momba ny hetsika dia azo apetraka maimaimpoana amin'ny magazine fampahalalana navoakan'ny Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward sy ny tranokala. (Arakaraka ny atiny dia tsy azontsika ekena izany)
Azafady fenoy ny takelaka voatondro ary apetraho amin'ny tompon'andraikitra amin'ny toerana.
Fandaharana hetsika fananganana hetsika fampahalalana vaovao momba ny hetsika pejy XNUMX
Momba ny fitantanana fotodrafitrasa
Amin'ny andro fampiasana, azafady mba atolory ny fandraisana ny fangatahana alohan'ny hampiasana ny efitrano.
Ho fanomanana loza, azafady mba raiso ny fepetra rehetra mety hitranga, toy ny fitarihana ny mpitsoa-ponenana, ny vonjy taitra, ny fanampiana vonjy taitra, sns.
Eo ambanin'ny lalàna mifehy ny afo, azafady mba diniho tsara ny fahafahan'ny mpitsidika.Tsy azo ampiasaina mihoatra ny fahaiza-manao izy io.
Raha sendra lozam-pifamoivoizana na olona marary dia ampandreneso haingana ireo mpiasa ary araho ny torolalana.
Aza hadino fa tsy tompon'andraikitra amin'ny halatra ny trano fandraisam-bahiny.
Misy efitrano ho an'ny ankizy amin'ny rihana voalohany.Raha te hampiasa azy ianao dia ampahafantaro ny mpiasa.Azafady tantano eo amin'ny lafiny mpampiasa.
Aorian'ny fampiasana dia avereno any amin'ny fanjakana tany am-boalohany ireo fitaovana sendra nampiasaina.Ho fanampin'izay, azafady mba alao antoka fa ento miaraka aminao ny fanananao ary aza avelanao any amin'ilay toerana.
Raha ny tokony ho izy, raha simba na very ilay fotodrafitrasa na fitaovana dia takiana aminao ny manonitra ny fahasimbana.
Azafady mody any an-trano izay fako namboarina teny ambony lampihazo, toy ny fako nateraky ny fihinanana sy fisotroana.Raha sarotra ny hitondra azy mody, dia hikarakara izany amin'ny sarany izahay, koa mba ampahafantaro anay.
Raha ilaina ny mitantana ilay toerana, dia mety hiditra ao amin'ny efitrano ampiasainao ny mpiasa iray.
Ny mpikarakara dia tompon'andraikitra amin'ny fandaminana sy ny fitarihana ny mpitsidika, ny fakana an-keriny ary ny fialamboly.Miankina amin'ny hetsika, ny mpikarakara dia mety manomana mpiasa amin'ny sehatra, jiro, feo sns.
Raha antenaina fa mpitsidika marobe no ho tonga alohan'ny fotoana fisokafana, na raha misy ny fisafotofotoana amin'ny fotoanan'ny hetsika dia andraikitry ny mpikarakara ny manendry mpikarakara ampy.
Azafady mba alao antoka fa mandinika ireto manaraka ireto ny mpikarakara ary mampahafantatra ireo mpitsidika.
Aza asiana taratasy, kasety, sns. Amin'ny rindrina, andry, varavarankely, varavarana, gorodona sns.
Aza mivarotra na mampiseho entana, mizara zavatra vita pirinty, na manaova zavatra mitovy amin'izany raha tsy mahazo alalana.
Aza mitondra entana na biby mampidi-doza (afa-tsy alika mpanompo) raha tsy mahazo alalana.
Voarara ny fifohana sigara ao amin'ny trano iray manontolo.Aza mihinana, misotro na mifoka raha tsy amin'ny faritra voatondro.
Aza mamokatra volavola mety hanelingelina ny fitantanana ilay fotodrafitrasa na mety hanelingelina ny hafa.
Aza manelingelina ny hafa, toy ny tabataba, kiakiaka, na herisetra.
Ampiasao azafady ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka any ambanin'ny tany (fetran'ny haavon'ny 2.1 m)
Maimaimpoana ny mpikarakara amin'ny fiantsonany amin'ny andro, saingy misy fetrany ny isan'ny fiara miankina amin'ny toerana.
Ny fijanonana ho an'ny mpampiasa ankapobeny dia homena vola.
Ny trano fidiovana azo zahana amin'ny seza misy kodiarana dia hita eo amin'ny rihana voalohany sy voalohany amin'ny rihana ambany sy amin'ny efitrano lehibe (rihana voalohany).
Misy seza misy kodiarana hofaina ihany koa ao amin'ilay trano, koa mba ampahafantaro anay raha tianao.
Raha miditra amin'ny toeram-piantsonana ambanin'ny tany ianao dia miasà azafady.